Static Text Link Guidelines for Webmasters - ပုံသေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ | mmshare
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် ပါရှိသည့် စာမျက်နှာများကို ဆက်စပ် စုစည်းမိစေရန်အတွက် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း (Linking) လိုအပ်သည်။ Webmaster, Web Developer, Web Designer သို့မဟုတ် Web Architect တစ်ဉီးအနေဖြင့် ထိုသို့ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစား (Linking Type) ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ - ပုံသေလမ်းကြောင်း (Static link) နှင့် လမ်းကြောင်းရှင် (Dynamic link) ဟူ၍ ရွေးစရာ နှစ်ခု ရှိလာသည်။
Static Links vs Dynamic Links
ပုံသေလမ်းကြောင်း (Static Link) ဆိုသည်မှာ -
လိုအပ်သည့် HTML code များဖြင့် စနစ်တကျ ရေးသားတည်ဆောက်ထားသော
မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို (ယခုဖြစ်စေ၊ နောင်တွင်ဖြစ်စေ) အပြောင်းအလဲမရှိသော
မျက်စိမမြင်သူများ အနေဖြင့်လည်း Screen Reader များအကူအညီဖြင့် ဖတ်ရှု အသုံးပြုနိုင်သော
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ (Website Visitors) များနှင့် အင်တာနက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Internet Search Engines) များအားလုံး အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သော
အင်တာနက် စာမျက်နှာတစ်ခုအတွင်း သို့မဟုတ် အခြား အင်တာနက်စာမျက်နှာများသို့ ချိတ်ဆက်ပေးထားသော - ချိတ်ဆက်မှု (Linking) တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာ - http://mmshare.org/article/text-links-guidelines-for-webmasters , http://www.example.com/static-link.html
လမ်းကြောင်းရှင် (Dynamic Link) ဆိုသည်မှာ -
Database များအတွင်း အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ကြည့်ရှုသူရှိမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသော
ယခုမြင်နေရသည့် လမ်းကြောင်းကိုပင် မှတ်သားထားပြီး၊ နောင်တစ်ချိန် ပြန်ဖွင့်ကြည့်သောအခါ ယခင်နေရာ (စာမျက်နှာ) မဟုတ်တော့သော
လာရောက်လည်ပတ်သူ (Website Visitors) များနှင့် အင်တာနက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Internet Search Engines) များအတွက် ဖတ်ရှုမှတ်သားရန် ခက်ခဲသော
အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည့် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဥပမာ - http://www.example.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2...
Unseen Links (Links in the Flash)
ဝက်ဘ်ဆိုက် (Website) တစ်ခုအတွင်း ထည့်သွင်းထားသည့် Flash ဖိုင်များအတွင်း ပါရှိသည့် ချိတ်ဆက်မှုများကို မျက်စိဖြင့်မြင်ပြီး၊ လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် လူသားများ အနေဖြင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ Search Engine များအနေဖြင့် မမြင်ရသည့် ချိတ်ဆက်မှုများ (Unseen Links) ဖြစ်နေသည်။ (There are no static links in flash websites for Search Engines.)
Flash ကို အသုံးပြုထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် (Websites) များမှ လူသားများအနေဖြင့် သာမန်ဝက်ဘ်ဆိုက် များတွင် မရနိုင်သည့် အခြားသော ကောင်းကျိုး များစွာရရှိနိုင်သော်လည်း၊ Search Engine များအတွက်ဆိုလျှင် Flash ဖိုင်တစ်ခုမှာ ရိုးရိုးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်မျှပင် အသုံးမ၀င်ပေ။
ထို့ကြောင့် Flash များဖြင့်သာ တည်ဆောက်ထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် (Flash Website) တစ်ခုကို Search Engine များက မွှေနှောက်ဖတ်ရှုခြင်း (Crawling) နှင့် အညွှန်းပြုစုခြင်း (Indexing) များ မလုပ်နိုင်ကြပေ။ အကျိုးဆက်မှာ Flash Website များအတွင်း ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို အင်တာနက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှတဆင့် ရှာဖွေ၍ မရနိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်။
URL Rewriting - အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်း
Database များအတွင်း အကြောင်းအရာ၊ အချိန် စသည့်တို့ကို အခြေခံမှတ်သားထားပြီး အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့် လမ်းကြောင်းများ (Web pages & Links) များကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးလေ့ရှိသည့် Content Management System (CMS) စနစ်သုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် Link များမှာ ယခုလို ဖြစ်နေတတ်သည်။
ထိုသို့သော လမ်းကြောင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ရေးသားခြင်း (URL rewriting) ပြုလုပ်နိုင်သည်။
User များနှင့် Search Engine များအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး မှတ်သားရန် လွယ်ကူလာခြင်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း အလုပ်လုပ်ပုံများကို Visitor များ မသိရှိနိုင်တော့ခြင်း
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နည်းပညာများပြောင်းလဲသွားစေကာမူ အင်တာနက်လိပ်စာများ ပြောင်းလဲမသွားစေရန် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း - စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
The right way - ရွေးရမည့် လမ်းကြောင်း
Webmaster စသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်သူများ အနေဖြင့် ပုံသေလမ်းကြောင်း (Static Links) များဖြင့်သာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ချိတ်ဆက်သင့်သည်။ မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့် နေရာနှင့် အခြေအနေများတွင်သာ Flash ဖိုင်များ၊ (Dynamic Links) လမ်းကြောင်းရှင်များကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက် သင့်ပေသည်။ အကယ်၍ လမ်းကြောင်းရှင်များကို အသုံးပြုရသည့် အခါတွင်လည်း URL Rewriting နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ သို့မှသာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင် (Website Owners) များ၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် “မိမိ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှတဆင့် လူတိုင်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရေး” ကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Reference and More Useful Information -
Flash Websites - Pros and Cons from About.com
A Complete URL Rewriting Solution for ASP.NET 2.0 from Simple Talk
IIS vs. ASP.NET URL Rewriting from Code Project
Rewrite engine from Wikipedia
URL Rewriting in ASP.NET from Microsoft MSDN Library
URL Rewriting Guide from Apache Foundation